भविष्यवाणी भनेको के हो? | बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍न
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इन्डोनिसियन इलोको उम्बुन्डु एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन काजाक काजाक (अरबी) किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किलुबा कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्षोसा गून ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली डच डेनिश ताहिटी तेलगु थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मले मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सिंहला सिडामा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
भविष्यवाणी भनेको के हो?
भविष्यवाणी भनेको परमेश्‍वरले दिनुभएको सन्देश हो। भविष्यवक्‍ताहरू ‘पवित्र शक्‍ति पाएर परमेश्‍वरको तर्फबाट बोल्थे’ भनेर बाइबलमा बताइएको छ। (२ पत्रुस १:२०, २१) त्यसैले परमेश्‍वरबाट पाएको सन्देश अरूलाई सुनाउने व्यक्‍ति भविष्यवक्‍ता हो।—प्रेषित ३:१८.
भविष्यवक्‍ताहरूले परमेश्‍वरबाट कसरी जानकारी पाउँथे?
आफ्नो विचार भविष्यवक्‍ताहरूसम्म पुऱ्‍याउन परमेश्‍वरले विभिन्‍न तरिका चलाउनुभयो:
लेखेर। एक अवसरमा परमेश्‍वरले मोशालाई दस आज्ञा ढुङ्‌गाको पाटीमा लेखेर दिनुभएको थियो।—प्रस्थान ३१:१८.
स्वर्गदूतहरूद्वारा कुराकानी गरेर। उदाहरणको लागि, परमेश्‍वरले मोशालाई एउटा सन्देश दिन स्वर्गदूत चलाउनुभयो। मोशाले त्यो सन्देश मिश्रको फिरऊनलाई सुनाउने थिए। (प्रस्थान ३:२-४, १०) कुनै कुरा तोकैरै बताउनुपर्नेछ भने परमेश्‍वरले स्वर्गदूतहरूलाई आफ्नो सन्देश जस्ताको तस्तै बताउन लगाउनुभयो। जस्तै, उहाँले मोशालाई यसो भन्‍नुभयो: “यी कुरा लेख्‌, किनकि यिनै कुराबमोजिम तँ र इस्राएलसित मैले करार बाँधेको छु।”—प्रस्थान ३४:२७. *
दर्शन दिएर। कहिलेकाहीं भविष्यवक्‍ताहरूलाई विपनामा वा होसमा भएको बेला दर्शन दिइन्थ्यो। (यशैया १:१; हबकूक १:१) कुनै-कुनै दर्शन त यति जीवन्त हुन्थे कि त्यो देख्ने व्यक्‍ति पनि त्यसमा भाग लिन्थे। (लूका ९:२८-३६; प्रकाश १:१०-१७) कुनै दर्शन भने निदाएको बेलाको जस्तो अर्धचेत अवस्थामा पनि देख्थे। * (प्रेषित १०:१०, ११; २२:१७-२१) कुनै-कुनै अवस्थामा परमेश्‍वरले भविष्यवक्‍ताहरूलाई सपनामार्फत पनि आफ्नो सन्देश दिनुभयो।—दानियल ७:१; प्रेषित १६:९, १०.
प्रेरणा दिएर। परमेश्‍वरले आफ्नो सन्देश सुनाउन भविष्यवक्‍ताहरूको मनमा आफ्नो विचार हालिदिनुभयो। यसबारे बाइबलमा यसो भनिएको छ, “धर्मशास्त्रमा भएका सबै कुरा परमेश्‍वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो।” “परमेश्‍वरको प्रेरणाद्वारा” भन्‍ने वाक्यांशलाई “परमेश्‍वरले सास हालिदिनुभयो” भनेर पनि अनुवाद गर्न सकिन्छ। (२ तिमोथी ३:१६; दि एम्फसाइज्ड बाइबल) परमेश्‍वरले आफ्ना सेवकहरूको मनमा आफ्नो विचार ‘हाल्न’ पवित्र शक्‍ति चलाउनुभयो। यसरी परमेश्‍वरबाट पाएको सन्देशलाई भविष्यवक्‍ताले आफ्नै शब्दहरूबाट व्यक्‍त गरे।—२ शमूएल २३:१, २.
भविष्यवाणीमा भविष्यमा हुने घटनाबारे पहिल्यै बताउनु मात्र समावेश छ?
भविष्यवाणीमा भविष्यमा हुने घटनाबारे पहिल्यै बताउनु मात्र समावेश छैन। परमेश्‍वरले दिनुभएको प्रायजसो सन्देश भविष्यसित सम्बन्धित हुन्थे। ती सन्देशहरूमा सीधै भविष्यबारे बताइएको नहुन सक्छ। उदाहरणको लागि, परमेश्‍वरका भविष्यवक्‍ताहरूले इस्राएलीहरूलाई खराब कामहरू नगर्न बारम्बार चेतावनी दिएका थिए। ती चेतावनीहरू सुनेमा उनीहरूले भविष्यमा आशिष्‌ पाउने थिए तर त्यसअनुसार नगरेमा दण्ड भोग्ने थिए भनेर ती चेतावनीहरूमा बताइएको थियो। (यर्मिया २५:४-६) इस्राएलीहरूको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्‍ने कुरा उनीहरूको छनौटमा भर पर्ने थियो।—व्यवस्था ३०:१९, २०.
भविष्यसित सम्बन्धित नभएका बाइबलका भविष्यवाणीहरू
एक पटक इस्राएलीहरूले परमेश्‍वरसँग मदत माग्दा उहाँले एक जना भविष्यवक्‍तामार्फत एउटा सन्देश दिनुभयो। उक्‍त सन्देशमा इस्राएलीहरूले परमेश्‍वरको आज्ञा नमानेकोले उहाँले मदत नगर्नुभएको हो भन्‍ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो।—न्यायकर्त्ता ६:६-१०.
येशूले एक जना सामरी आइमाईसित कुरा गर्दा तिनको विगतको घटनाहरू बताउनुभयो। परमेश्‍वरको मदतले गर्दा मात्र येशूले त्यसरी बताउन सक्नुभयो। उहाँले भविष्यबारे केही बताउनुभएको थिएन तैपनि त्यस आइमाईले उहाँलाई भविष्यवक्‍ता भनिन्‌।—यूहन्‍ना ४:१७-१९.
येशूको पुर्पक्षको बेला शत्रुहरूले उहाँको अनुहार छोपे, उहाँलाई हिर्काए अनि भने: “लौ भविष्यवाणी गर्‌, तँलाई हिर्काउने को हो?” त्यतिबेला उनीहरूले येशूलाई भविष्यमा के हुनेछ भनेर सोधिरहेका थिएनन्‌ बरु परमेश्‍वरको मदत लिएर उहाँलाई हिर्काउने व्यक्‍ति को हो भनेर पत्ता लगाउन भनिरहेका थिए।—लूका २२:६३, ६४.
^ अनु.4यस उदाहरणमा परमेश्‍वरले मोशासँग सीधै कुरा गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ। तर वास्तवमा मोशाको व्यवस्थाको करार दिन परमेश्‍वरले स्वर्गदूतहरू चलाउनुभएको थियो।—प्रेषित ७:५३; गलाती ३:१९.
^ अनु.5यी शास्त्रपदलाई मूल ग्रीक भाषाको बाइबलमा परमेश्‍वरबाट सन्देश पाउनेहरू निदाएको बेलाको जस्तो अर्धचेत अवस्थामा हुन्थे भनेर बताइएको छ।
बाइबल बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरूको जवाफ
परमेश्वर आफ्ना भविष्यवक्ताहरूमार्फत बोल्नुहुन्छ
परमेश्वरका भविष्यवक्ताहरूले कस्ता सन्देशहरू सुनाए? तिनीहरूले बताएका चार वटा विषय विचार गर्नुहोस्।
संसारको अन्त कहिले हुन्छ?
के बाइबलले संसारको अन्त ठ्याक्कै कहिले हुनेछ भनेर बताउँछ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने भविष्यवाणी भनेको के हो?
ijwbq लेख १०८
पवित्र शक्‍ति के हो?
“अन्तको दिन” वा “अन्तको समय”-को चिन्ह के हो?
पूरा भएका भविष्यवाणीहरू